China Cold kupuruzira mugwagwa wekumaka muchina fekitori uye vanotengesa | ACE MACHINERY
Ruoko-pusha inotonhora pendi yekupuriza muchina ndeye yakakwira-kumanikidza uye kuyerera-inotungamirwa isina mweya isina chekumaka muchina. Muchina uyu unofambiswa neinjini kusundira yakakwira-yekumanikidza plunger pombi kuti ishande, wobva wasundira pendi yekupfapfaidza neyakaipisisa. Muchina wese une zvakanakira chimiro chakareruka, nyore kugadzirisa uye kurema kurema. Zvakare nemhando dzakasiyana dzemhando dzeimwe chete uye mbiri pfuti pfuti, vashandisi vanogona kusarudza kusangana zvakasiyana zvinodiwa.
Ruoko kusundira munzira yekumaka muchina kunoiswa kumugwagwa kumaka yendege, yekupaka, fekitori uye imwe inotonhora nzvimbo ine nyore yekumaka mashandiro, vashoma vashandi, yakakwira yekumaka kushanda.
Outer miganhu (L * W * H) 1250 mamirimita X1000 mm X1200mm
Yese huremu hwemuchina 240KG
Power Injini 5.5HP Honda injini
Yakakodzera bemhapemha Cold pendi yekumaka pendi (acrylic acid)
Paint kuyerera 10L / Min
Kupfapfaidza pombi kumanikidza 8-12MPA
Kufananidza kamwene Changjiang kamwene
Kumwaya pfuti Inogona kushandiswa panguva imwe chete kana zvakasiyana
Bemhapemha ukobvu 1.2-4mm
Girazi bead bhokisi
Clutch inoshanduka shaft control system
Kushanda kwezuva nezuva kushanda 3000m²
1.Energy kuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza: kuchengetedza 30% zvinhu kana ichienzaniswa neyechinyakare mweya kupuruzira, hapana mweya-rubatsiro, hapana splash, uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza
2.Iyo isina mhepo yekutsvaira tekinoroji iyo inotyaira yakanyanya-pombi pombi neinjini peturu inoiswa kumaka pamunda wenhandare, chimiro chemutsara chakajeka, chakatsetseka, chakazara, uye yunifomu ine yakakwira kushanda-kushanda.
3 Yakasimba mhedzisiro: yakanyanya kumanikidza atomizing mhedzisiro, yakasimba kunamatira, hapana akafa kona pakuvaka, kumeso uye kunyangwe pamusoro.
4.The kamwene zviri nyore disassemble, uye dzakasiyana mokugezera zvinogona kutsiviwa kudzora zvakasiyana mutsetse upamhi. Inogona kushandiswa seyakajairwa isina mweya yekumaka kana kusaina.
5.Kusundira neruoko, kutendeuka wakasununguka, kutendeseka kutungamira uye kusimba kudhiraivhara.
Yakasiyana Spraying pfuti yeakasiyana mutsara upamhi
Mutsara upamhi mm
Mikova kukwirira mm （nezve）
（Kuendesa zvisina kujairika）
Ongorora: Kureba kwemhino kunoenderana neiyo viscosity yependi uye kumanikidzwa kwepombi yekupfapfaidza.
1. Ko zvakadii mushure mekutengesa sevhisi?
A: Isu tine basa rekupa hunyanzvi kuraira mune ese masherufu hupenyu hwese. Isu tinobatsira kugadzirisa matambudziko kuburikidza neWhatsapp, Skype, uye email nekutumira mifananidzo nemavhidhiyo.
3. Ko zvakatumirwa?
Pashure: Yega-inofambiswa iwe munzira yekumaka muchina
Zvadaro: Yese- mune-imwe nzira yekumaka muchina
46inx2 Kutasva-paKongiri Simba Trowel
ZID-UL-2000W Yakakwira Frequency Konkrete Vibrator
12000RPM Yekumhanyisa kongiri vibrator shaft